कुलामानकी धर्मपत्नी भन्दै प्रचार गरिएकी महिला को हुन ? गरिन अफवाह फैलाउनेलाई कार्वाहीको माग — Sanchar Kendra
कुलामानकी धर्मपत्नी भन्दै प्रचार गरिएकी महिला को हुन ? गरिन अफवाह फैलाउनेलाई कार्वाहीको माग
काठमाडौँ । एउटा फेसबुक पेजले आइतबार कुलमान घिसिङको धर्मपत्नी भन्दै गायिका तथा फिल्म निर्मात्री छिमी मान्मा तामाङको फोटो पोष्ट गरेपछि गायिका तामाङ आ,क्रोशित भएकी छन् ।
‘नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका घिसिङ मिडिया र सोशल मिडियामा चर्चामा रहेका छन् । यसैबेला घिसिङ र उनकी साली गायिका छिमीको फोटोलाई गलत अर्थ लाग्ने गरी उक्त फेसबुक पेजले क्याप्सनसहित शेयर गरेको भन्दै कमेन्टमा गाली गरिएको छ ।
घिसिङकी पत्नी दीपा तामाङ हुन् । उक्त फेसबुक पेजको पोष्टबाट पाठकमा गलत सुचना प्रवाह नहोस् भन्ने ध्येयले गायिका छिमीले आइतबार घिसिङ र उनकी पत्नी दीपाको समेत तस्बिर शेयर गरेकी छन् । गायिका छिमीले आफ्नो फेसबुकमा तस्बिर पोष्ट गर्दै लेखेकी छन्, ‘कुलमान घिसिङज्यूको धर्मपत्नी यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई जानकारी होस् । सत्यतथ्य नबुझी यसरी अरुको फोटो दुरुपयोग गरेर जनतालाई भ्रम छरेर पेज लाइक बढाउनेहरुलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्यो ।’